Fivarotana any Nha Trang
Ao amin'ny tanàna vietnamiana ao Nha Trang, afaka miala sasatra ianao, mankafy ny masoandro mafana, ary koa ny fivarotana, izay tena mahasoa sy mahaliana eto. Ny fivarotana ao Nha Trang dia tsy toeram-pivarotana lehibe fotsiny, fa koa fivarotana madinika mahaliana, ary koa tsena marobe. Amin'ny ankapobeny, ny rehetra dia hahita zavatra amin'ny tsirony.
Fivarotana any Nha Trang, Vietnam
Toeram-pivarotana. Mazava ho azy, ao Nha Trang, toy ny any amin'ny tanàna lehibe hafa rehetra, dia misy toeram-pivarotana marobe izay mahafinaritra sy mora azo amin'ny mpizaha tany Eoropeana. Ao amin'ny Thai Nguyen dia misy supermarket MaxiMark, izay ahitanao ny zava-drehetra avy amin'ny sakafo ho akanjo. Amin'izany fotoana izany, ny vidiny ho an'izany rehetra izany dia hahafinaritra ny mpizahatany amin'ny vitsy kely.
Ao afovoan-tanàna ny Nha Trang Center - tranobe lehibe sy tsara tarehy ao amin'ny efitrano efatra, izay ahitanao karazana entana maro, toy ny toerana misy cafe sy fialam-boly isan-karazany, toy ny bowling, cinema sy ny sisa. Mitadiava ity foibe ity azonao amina Tran Phu, 20 taona.
Ny tambajotra METRO, fanta-daza maneran-tany, dia manana toeram-pivarotana lehibe ao Nyachang. Ao amin'izany no tsara indrindra hividianana fitaovana isan-karazany. Ao amin'ny departemantan'ny fofona ihany koa dia afaka mahita karazan-tserasera goavana ianao. Ary ny toeram-pivarotana dia ao amin'ny Vo Can Village, Vinh Trung Ward, 23/10 St., izay akaiky ny fetran'ny tanàna.
Shops. Ny fivarotana ao Nha Trang dia mahaliana kokoa ny mitsidika noho ny toeram-pivarotana lehibe, satria izy ireo dia manavaka loko lehibe, ary koa ireo zavatra mahaliana hafa izay tsy ho hitanao any Eorôpa. Ohatra, malaza kokoa noho ny fivarotana fitafiana tsotra ao amin'ny Atelier Nyachang ny fanamafisana ireo akanjo ireo. Seza sy vatomamy hafa sarobidy sy lafo vidy eto ianao afaka mividy amin'ny vidiny kely, ary ny serivisy mpanjifa ao amin'ny atelier fotsiny amin'ny avo indrindra. Atelier Hoang Yen dia miorina ao amin'ny Nguyen Thien Thuat, 128. Azonao atao ihany koa ny mividy lamba sy sehatra tsara ao amin'ny fivarotana Silk & Silver ao Tran Quang Khai, 6.
Ny fivarotana hoditra Khatoco, hita ao Tran Phu, 70, dia miavaka amin'ny karazana varotra isan-karazany. Mazava ho azy fa be dia be ny zava-drehetra amin'ny hoditry ny voay sy ny aotirisy. Ny vidin'ny fivarotana any Vietnam, ary indrindra indrindra ao Nha Trang ho an'ireo vokatra ireo dia ambany lavitra noho ny any amin'ny firenen-kafa, Noho izany dia mila mividy kitapo na kitapo vita amin'ny hoditra mena ianao any amin'io toeran-kafa io.
Ary, mazava ho azy, ny fiantsenana ao Vietnam ao Nha Trang dia tsy afaka manao firavaka. Ao amin'ny ivontoeran'ny firavaka sy santionan'ny Angkor Treasure dia afaka mividy karazana firavaka samihafa, toy ny perla, ny vidiny ao Nha Trang dia ambany lavitra noho, ohatra, any Eorôpa. Azonao atao ny mahita izany ao amin'ny Hung Vuong, 24B.
Tsena. Ao amin'ny iray amin'ireo araben'ny tanàna afovoan-tanàna no misy ny Market Market malaza, izay tokony hitsidika ny mpizahatany rehetra. Fahatsiarovana maro, voankazo, trondro, lokomamy avy any an-toerana ... Izany no ilainao mba hahafantaranao ny kolontsain'ny tanàna.
Mainty ny akanjon'akanjo
Trompetra mitafy rongony
Women's Park Jackets
Inona no lamaody ara-pahasalamana tokony hofidiana?
Inona no vitamina hita ao amin'ny serizy?
Inona no tian'ny olona amin'ny ankamaroan'ny olona?
Kianja iray miaraka amin'ny tempoly miharatra
Ny valindrihana eo amin'ny loggia - izay vita dia malaza?
Ny Tranombokin'i Vatikana
Lasopy maina miaraka amin'ny salmon
Aquarium miaraka amin'ny mozika
Manaova varavarana amin'ny tanany
Sakafo DASH - sakafo ara-pahasalamana amin'ny fihanaky ny homamiadana
Ny ankizy dia matory amin'ny vavany misokatra
Bibikely cookies - recipe